यसरी सजिलै बुझ्नुहोस् फुल एचडी र फोरके प्रविधि - Tech News Nepal Tech News Nepal
आईतवार, बैशाख १२, २०७८ २१:१७
यसरी सजिलै बुझ्नुहोस् फुल एचडी र फोरके प्रविधि
काठमाडाैं । वास्तवमा फोरके कुनै नयाँ प्रविधि होइन । यो एउटा रेजाेलुसन स्ट्याण्डर्ड (resolution standard) हो । यस्तो किसिमको प्रविधिमा भिडियो, डिस्प्ले तथा प्रोजेक्टर बजारमा आएको धेरै भइसक्यो ।
युट्युबले नै २०१० देखि फोरके भिडियो अपलोडको अनुमति दिन सुरु गरेको हो । त्यसअघि सोनीले करिब २०१२ तिर पहिलो फोरके प्रोजेक्टर ल्याएको थियो । आजभन्दा करिब १८ वर्षअघि पहिलो फोर के क्यामेरा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
रेजाेलुसनको कुरा गर्दा केही कुरा थाहा पाउँदा सरल रूपले बुझिन्छ । डिस्प्लेमा साना साना युनिट हुन्छन्, जसलाई पिक्सेल भनिन्छ । फोरकेमा ३ हजार ८४० फिक्सल होरिजेन्टल्ली हुन्छन्, भने भर्टिकल्ली २ हजार १६० पिक्सेल हुन्छ । होरिजोन्टल्ली यसमा करिब ४ हजार पिक्सेल हुने भएकोले यसलाई फोरके भनिन्छ ।
फुल एचडीमा रेजाेलुसन १९२० र १०८० हुन्छ । जब यसको उचाई र चौडाई दुवैमा पिक्सेललाई दुई गुणा बढाइन्छ तब यसमा फोरके पाइन्छ । एउटा फुल एचडीको चार गुणा पिक्सेलमा फोरके रेजुलेसन पाउन सकिन्छ । टु केको कुरा गर्दा त्यसमा १२८० र ७८० पिक्सेल हुन्छ ।
फोरके को स्क्रिन रेजाेलुसनकाे कुरा गर्दा यसमा कुल ८ मेगापिक्सेल हुन्छ । किनभने यसको चौडाई करिब ४ हजार र उचाई करिब दुई हजार पिक्सेलको छ । जब तपाईं यी दुवैलाई गुणा गर्नुहुन्छ, तब तपाईंले यसमा करिब ८० लाख पिक्सेल पाउनुहुन्छ ।
तपाईंसँग फोरके टेलिभिजन छ, तर तपाईसँग फोरके कन्टेन्ट छैन भने त्यसलाई हेर्न मज्जा आउँदैन । यसका लागि तपाईंले आफ्नो मोबाइलबाट फोरके भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युब वा इन्टरनेटबाट फोरके भिडियो सामग्री डाउनलोड गरेर टिभीमा हेर्न सक्नुहुन्छ । फोरके भिडियो रेकर्ड गर्न तपाईंसँग कम्तिमा १२ मेगापिक्सेलको क्यामेरा हुनुपर्छ ।
ब्लुटुथको नाम कसरी राखियो, के तपाईंलाई थाहा छ ?
काठमाडौं । हामीसँग भएका हेडफोन, स्पिकर, मोबाइल फोन आदि जस्ता अनेक डिभाइसमा ब्लुटुथको लोगो देखिरहेका
ब्याण्डविथ के हो, अनि कसरी नापिन्छ इन्टरनेटको स्पिड ?
काठमाडाैं । इन्टरनेट हाम्रो दैनिकीको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ । खानु, सुत्नु, उठ्नु जस्ता आफ्ना
काठमाडाैं । हाम्रो घरमा यस्ता धेरै उपकरणहरू छन्, जो इन्टरनेटसँग जोडिएका हुन्छन् । राउटरले नै